Maqaamka Muqdisho ma siyaasiyiin ba ku owr-kacsada? - BBC News Somali
Maqaamka Muqdisho ma siyaasiyiin ba ku owr-kacsada?
Maqaamka Muqdisho iyo in maamul Goboleed ay noqoneyso waxay soo taagnayd tan iyo dowladdii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud.
Shirkii dhowaan fashilka ku soo dhammaday Garowe ayaa looga hadlay in Muqdisho ay noqoneyso maamul Goboleed iyo inay caasimadda Soomaaliya oo keli ah ahaan doonto. Waxaana arrintaas ka dhashay khilaaf.
Inkastoo mowqifka dowladda federaalka ee Soomaaliya uusan caddeyn, haddana siyaasiyiinta reer Muqdisho ayaa sidoo kale isku khilaafsan arrintaas. Waxaa jiro kuwa badan oo aaminsan in Banaadir ay noqoto maamul goboleed.
Goddoomiyaha Gobolka Banadir, Cabdiraxman Cumar Cusmaan Yariisow, ayaa dhowaan sheegay in go'aanka maqaamka Muqdisho uu marayo hannaan dowladeed.
"Anaga marabno sidii dowlad goboleedyada kale ku dhismeen, inta dad isu yimaado ay dhahaan anaga waxaan isu doorannay inaan dowlad goboleed nahay oo wax la boobo. Taas waqtigeeda waa laga soo gudbay", ayuu yiri Yarisoow.
Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya, Yusuf Garaad ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray in dowladda aysan ku cusleyn go'aan ka gaaridda maqaamka Muqdisho.
Xuquuqda Sawirka @ygaraad @ygaraad
Safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyay Kenya, Maxamed Cali Ameeriko oo horraantii bishii may wareysi siiyay BBC Somali ayaa sheegay in xuquuq dastuuri ah ay tahay in gobolka Banaadir uu ka mid noqdo dowlad goboleedyada.
"Xukuumadda waxaan ugu baaqnay in ay si degdeg ah u geeyaan barlmaanka, maqaamka Muqdisho lana ansixiyo. Waxaa kaloon ugu baaqnay in dadkaasi Soomaliyeed ee ku nool magaala madaxda Soomaaliya ee Muqdisho ay yihiin muwaadiniin xaq u leh in ay xuquuqdooda helaan", ayuu yiri.
Maqaamka caasimadda Soomaaliya loo raadinayo waa mid noocee ah? waxaa BBC-da u sharaxay Danjire Maxamed Cali Ameeriko oo...
Posted by BBC News Somali on Tuesday, 23 April 2019
Inkastoo dastuurka qabyo qoraalka ah ee Soomaliya uu ku xusan yahay in laba gobol iyo in ka badan ay sameysan karaan maamul Goboleed.
Cutubka koobaad, qodobkiisa 9aad ee dastuurka qabyo qoralka ah ee Soomaliya wuxuu dhigayaa in Muqdisho inay tahay caasimadda Soomaaliya.
"Maqaamka Magaalo-madaxda Soomaaliya waxaa go'aan looga gaari doonaa dib u eegista dambe ee dastuurka. Waxaana sharci gaar ah ka soo saari doona labada aqal ee baarlamaanka Federaalka Soomaliya", ayaa ku xusan qodobkn.
In maqaamka Muqdisho la isku qabsado maxaa sabab u ah
Balse dhameystirka dastuurka Soomaaliya waa qodob ka mid ah kuwa aan illaa iyo hadda laga heshiin, iyadoo qaar ka mid ah maamul goboleedyada ay sheegayaan in dowladda federaalka ee hadda jirto aysan kala tashan qeybo ay sheegeen in la baddalay.